AJA သည် Streaming အသစ်၊ IP၊ 12G-SDI၊ Scan conversion Solutions နှင့် Updates အသစ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » AJA သည် Streaming အသစ်၊ IP၊ 12G-SDI၊ Scan conversion Solutions နှင့် Updates အသစ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်
BRIDGE LIVE ရုပ်သံလိုင်းပေါင်းစုံကိုထုတ်ဖော်ပြသ HD/ Single-ရုပ်သံလိုင်း UltraHD encoder / ဒီကုဒ်ဒါ / transcoder; OG-DANTE-12GAM 12G-SDI-Dante 64-channel audio embedder / disembedder; OG-ROI-SDI scan converter; နှင့်ပိုပြီး
မြက်ချိုင့်,, CA - Aja ဗီဒီယိုစနစ်များ ယနေ့ခေတ်တွင်မြင့်မားသော raster Live နှင့် On-demand ပါဝင်မှုနှုန်းမြင့်မားသော ၀ ယ်လိုအားကိုကျွမ်းကျင်သူများအားအရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ရန်ကူညီရန်အတွက်စွမ်းအားရှိသောအသစ်သောဖြေရှင်းချက်များနှင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုယနေ့ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ AJA ၏နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများမှာ BRIDGE LIVE ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုလုံခြုံစွာနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချစွာလွယ်ကူစေသည် UltraHD သို့မဟုတ် Multi- ရုပ်သံလိုင်း HD အများသုံးအင်တာနက်ပေါ်တွင် codec ရွေးချယ်မှုအမျိုးမျိုးနှင့်လုံခြုံသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး protocol များပါသောဗီဒီယို၊ 12-channel audio embedder / disembedder မှ DANTE သို့ OG-DANTE-12GAM 64G-SDI၊ OG-ROI-SDI openGear scan converter၊ နှင့် Ki Pro Ultra 12G v2.0 firmware ။ ဖျော်ဖြေရေး၊ ပညာရေး၊ ဝတ်ပြုရာနေရာများ၊ အားကစား၊ တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်အပလီကေးရှင်းများတွင်အသုံးဝင်သောအဖြေများသည်ဝေးလံသောအသံလွှင့်ခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ post နှင့် ProAV လုပ်ငန်းအသွားအလာများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ နှင့်ဝေးလံခေါင်သီအလုပ် setups အလွန်အရေးပါဖြစ်ကြသည်။
AJA တံတား LIVE
နက်ရှိုင်းသော metadata အထောက်အပံ့ပါဝင်သော turnkey 1RU solution သည် BRIDGE LIVE သည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုရိုးရှင်းစေသည် UltraHD သို့မဟုတ် Multi- ရုပ်သံလိုင်း HD compressed compressed baseband SDI အကြား / ကျယ်ပြန့်သော streaming များနှင့်အလှူငွေကုဒ်များမှ (H.265, H.264, MPEG-2 နှင့် JPEG 2000) မှဗွီဒီယိုကိုတကယ့်အချိန်တွင်။ plug-and-play gateway သည် SRT, RTMP / S, RTP, UDP နှင့် MPEG-TS များအပါအ ၀ င်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောကွန်တိန်နာများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုပံ့ပိုးပေးပြီး Adaptive Bitrate (ABR) လှေကားထစ် profile များကိုတိုးချဲ့ပြီး OTT ထုပ်ပိုးမှုအတွက်လက်လျှော့သည်။ AJA ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့် I / O နည်းပညာကိုသက်သေပြခဲ့သည် Comprimatoစွမ်းအင်ပြည့်ဝသော encoding / decoding / transcoding ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) သည်အရည်အသွေး၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးဗွီဒီယိုအပြောင်းအလဲများကို SDI encode နှင့်ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုအတွက် decode ဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ UltraHD အထိ 60p အထိ, ဒါမှမဟုတ် 1080 60p XNUMX လိုင်းအထိ HD တစ်ပြိုင်နက်တည်း 12G, 6G နှင့် 3G SDI နှင့်နောက်ပြန်သဟဇာတဖြစ်သော 1.5G-SDI ဆက်သွယ်မှုလေးခုမှတစ်ဆင့်။ AJA သည် JPEG 2000 VSF TR-01 ကို encoding / decoding လုပ်ရန်အမြဲတမ်း BRIDGE LIVE လိုင်စင်လည်းပေးထားသည်။
ယခု US $ 14,995 US MSRP အတွက် AJA ၏တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြန်လည်ရောင်းချသူများကွန်ယက်မှတစ်ဆင့်ရနိုင်သည်။ JPEG 2000 I / O လိုင်စင်အတွက်စျေးနှုန်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ ဖြစ်သည် HD Channel နှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၀၀၀ အတွက်အမေရိကန် MSRP UltraHD. www.aja.com/products/bridge-live
OG-DANTE-12GAM သည်မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆအသစ်ဖြစ်သော OpenGear ဖြစ်သည်®- တစ်ပြိုင်နက်တည်းပေါင်းကူးပေါင်း ၆၄ လိုင်းနှင့်အတူ Dante IP အသံဂေဟစနစ်သို့အနေဖြင့်ထည့်သွင်းထားသည့်အသံနှင့် 12G / 6G / 3G SDI ရင်းမြစ်များကိုပေါင်းကူးပေးသည့်သဟဇာတဖြစ်သောဖြေရှင်းချက်။ လူကြိုက်များသော Audinate မှ Dante အသံဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာသည်အိုင်ပီကွန်ယက်များမှဒစ်ဂျစ်တယ်အသံဖြန့်ဖြူးမှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်၊ ဖိသိပ်ခြင်းမရှိသော၊ multi-channel၊ latency နိမ့်၊ high-resolution အသံ၊ အရွယ်အစား၊ ရိုးရှင်းသောဝါယာကြိုးနှင့်လွယ်ကူသောတပ်ဆင်မှုတို့ကိုထောက်ပံ့သည်။ OG-DANTE-64GAM သည် Dante ကို SDI နှင့်နောက်သို့ဆက်သွယ်ထားသောမြင့်မားသောသိပ်သည်းဆအခြေခံအဆောက်အအုံဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။ အားကစားရုံများ၊ ရုပ်ရှင်ရုံများ၊ ဖျော်ဖြေပွဲများ၊ ဇာတ်စင်ငှားရမ်းမှုများ၊ OG-DANTE-12GAM သည်စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးနှင့် OpenGear ဘောင်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပြီး 12RU ဘောင်တစ်ခု၏ ၁၀ ခုအတွင်းရှိ SDI / Dante အသံပေါင်းကူးလိုင်း ၆၄၀ အထိခွင့်ပြုသည်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂,၄၉၅ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၃၉၅ ဖြင့် AJA ၏တစ်ကမ္ဘာလုံးပြန်လည်ရောင်းချသောကွန်ယက်မှမကြာမီရနိုင်သည်။ www.aja.com/products/og-dante-12gam
ယနေ့ရရှိနိုင်သော OG-ROI-SDI သည် 3G-SDI ထည့်သွင်းမှုအရည်အသွေးမြင့်ပြောင်းလဲခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည့် openGear scan converter တစ်ခုဖြစ်ပြီးဒေသ၏စိတ် ၀ င်စားမှုရွေးချယ်ခြင်းကို 3G-SDI နှင့် HDMI ထင်ဟပ်ရလဒ်များ။ ၎င်းတွင်ကျယ်ပြန့်သောအသံလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်ပုံရိပ်ချဲ့ခြင်း၊ ရှုထောင့်နှင့်ဘောင်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ဘောင်ထပ်တူပြုခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်အပါအဝင်ပုံရိပ်လည်ပတ်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ တိုင်းဒေသကြီးအကျိုးစီးပွားအထောက်အပံ့သည်ကျွမ်းကျင်သူများအားစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်း၊ ချုံ့ချဲ့ခြင်းနှင့်ကူးပြောင်းခြင်းအတွက်ဗီဒီယိုရင်းမြစ်အချက်ပြမှုများကိုအလွယ်တကူရယူနိုင်သည် HDMI နှင့် SDI ရင်းမြစ်များမှ SDI ။
ယခုအခါ AJA ၏တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြန်လည်ရောင်းချသူများကွန်ယက်မှအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၉၅ ဖြင့်ရနိုင်သည်။ www.aja.com/products/og-roi-sdi
တစ် ဦး အဖြစ်ယနေ့ရရှိနိုင် အခမဲ့ download, Ki Pro Ultra 12G v2.0 firmware သည် AJA Ki Pro Ultra 12G single-channel 4K သို့အဆင့်မြှင့်မှုများအသစ်ပြုလုပ်ပေးသည်။UltraHD အသံဖမ်း / ကစားသမားသို့မဟုတ်လေးရုပ်သံလိုင်း HD အသံဖမ်း။ နောက်ဆုံးထွက်အသစ်အနေဖြင့် genlock-free recording အတွက် input frame frame အသစ်ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် 8K / UltraHD8 workflows များကိုစွမ်းအားမြှင့် 2and တွဲဖက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူအဆင့်မြင့် raster လုပ်ငန်းအသွားအလာများကိုဗီဒီယို input ရင်းမြစ်အမျိုးမျိုးဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။ 12G- သို့မဟုတ် 12G-SDI mode ။
တစ် ဦး အဖြစ်ယခုရရှိနိုင် အခမဲ့ download. www.aja.com/products/ki-pro-ultra-12g
ထုတ်ကုန်အသစ်နှင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသီးခြားသတင်းထုတ်ပြန်ချက်များတွင်တွေ့နိုင်သည် AJA ၀ ဘ်ဆိုဒ်.
AJA သည် Streaming အသစ်၊ IP၊ 12G-SDI၊ Scan conversion Solutions နှင့် Updates အသစ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးသည် - စက်တင်ဘာလ 24, 2020
ယခင်: BB&S Lights Quarantine တိုတို - ကျွန်ုပ်တို့မသွားနိုင်ပါ
နောက်တစ်ခု: VFX Legion သည် CG မှကြီးကြပ်သူ Blake Anderson အား BC Division သို့လက်မှတ်ထိုးသည်